आज साउने सङ्क्रान्ति आजै लुतो फाल्ने दिन ! – Sapana Sanjal
July 16, 2021 409
Sapana Sanjal : सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मनाउने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रुपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ । साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन शुरु हुन्छ । माघ १ गते शुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते शुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेषरुपमा मनाइन्छ ।
Prevनेपाल प्रहरीकी हवल्दार ताराकुमारी श्रेष्ठ पक्राउ ! रङ्गेहात समातिएपछी मुद्दा दायर
Nextमिल्यो भागबण्डा, माधव नेपाललाई आठ ओटा मन्त्रालय !